Kompany oo shaki ku jiro inuu ciyaari karo kulanka Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar Kompany oo shaki ku jiro inuu ciyaari karo kulanka Chelsea.
Kompany oo shaki ku jiro inuu ciyaari karo kulanka Chelsea.
Kabtanka kooxda Manchester City Vincent Kompany ayaa shaki weyn ku jiraa inuu kooxda difaacaneysa Horyaalka Ingiriiska u safto kulanka ay booqanayaan kooxda Chelsea ciyaar Barclays Premier ah dhamaadka isbuucaan.
Daafacaan ayaa lasoo werinayaa inuu ka tegay Etihad Stadium ka dib markii uu dhaawac canqawga kasoo gaaray qeybtii labaa ciyaartii ay barbaraha City la dhaafi weysay Real Madrid kulankii Champions League-ga.
26 jirkaan ayaa sida laso sheegayo wuxuu dhaawac soo gaaray ciyaarta oo mareysa toban daqiioqo laakiin wuuxu ciyaaray ilaa ciyaartu kasoo dhamaaneysay.
Kompany received further treatment after the final whistle and was unable to conduct post-match interviews with the press.
Waxaana lasoo jeedinayaa in xidigaan shaki ku jiro inuu ciyaari karo kulanka ay booqanayaan Samford Bridge.